Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Tababarka Shaqaalaha Duulista ee daruuriga u ah post covid
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
IATA: Tababbarka lagama maarmaanka u ah shaqaalaha duulimaadka safka faafa
Ammaanka, howlaha, amniga, iyo anshaxa dhaqaalaha ayaa loo aqoonsaday inay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee duulimaadyada halkaasoo tababarka looga baahan doono si uu ula socdo xaalada taagan.
36% jawaabeyaasha sahanku waxay durba diiradooda u wareejiyeen masaafada / barashada.
85% jawaabeyaasha sahanka ayaa sheegay in barashada qadka tooska ah oo ay kujiraan fasallo dalxiis ay door muhiim ah ka ciyaari doonaan soo kabashada.
Maaddaama duulimaadyadu dib u dhismayaan, mowduucyada sida joogtaynta iyo dijitaalka ayaa muhiimad weyn yeelan doona.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxay sii daayeen cilmi baaris ku saabsan shuruudaha tababarka ee shaqaalaha duulimaadka maadaama ay warshaddu bilaabeyso inay kasoo kabato dhibaatadii COVID-19. Tababarka Shaqaalaha Duulista ee daruuriga u ah hawlgalka wadajirka ah kadib waxaa loo arkaa inuu yahay mid lama huraan ah
Sida laga soo xigtay sahan caalami ah oo ku saabsan 800 hoggaamiyeyaal shaqaale (HR) oo ka tirsan waaxda duulista ee mas'uulka ka ah barashada iyo horumarinta, shaqaalaha aqoonta u leh xirfadaha saxda ah iyo hubinta in shaqaalaynta cusub ee ka baxsan duulimaadku ay si dhakhso leh u helaan xirfadaha lagama maarmaanka u ah ayaa fure u noqon doona dhismaha si guul leh. shaqaale cudurada faafa kadib.
Si tan loo gaaro, barnaamijyada tababarka waxay u baahan doonaan in lala qabsado, iyadoo kalabar jawaabeyaasha HR ay sheegeen in ahmiyaddooda ugu sareysa ay tahay qiimeynta xirfadaha shaqo ee jira iyo khariidaynta kuwan looga baahan yahay kartida ururkooda. Tani waxay aasaas u noqon doontaa manhajyada tababarka loo baahan yahay. Aafadu mar hore ayey ku qasabtay shirkado badan oo duulimaadyo iyo shirkado kale qiimahooda, sida shirkadaha bixiya adeegga dhulka, inay qiimeeyaan xirfadaha guud ee ay leeyihiin shaqaalahoodu si ay ula qabsadaan shuruudaha cusub ee hawlgalka. Xaalad ahaan qodobka ayaa ahaa baahida loo qabo in xamuul lagu raro qolal ka mid ah diyaaradaha rakaabka oo dib loogu soo celiyay si ay xamuulka u qaadaan oo keliya.
Maaddaama dalabkii safarka hawada uu soo kabanayo, shirkaduhu waxay dib u soo celin doonaan shaqaalahoodii laakiin sidoo kale waxay shaqaaleysiin doonaan dibedda warshadaha. Natiijooyinka ka soo baxay sahanku waxay muujinayaan in mowduucyada amniga, hawlgallada, amniga, iyo anshaxa dhaqaalaha loo aqoonsaday inay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee tababarka looga baahan doono si ay ula socdaan xaaladda hadda jirta. Badbaadada ayaa la muujiyay inay si gaar ah muhiim ugu tahay shirkadaha diyaaradaha, shirkadaha bixiya adeegga dhulka iyo garoomada diyaaradaha.
“IATA waxay tababar siineysay xirfadleyda duulimaadyada muddo ku dhow 50 sano. Dabeecadda farsamo ee warshaddeena, oo ay weheliso shuruudo adag oo ay qeexeen nidaamiyeyaashu, waxay keeneysaa baahida loo qabo tababbarka jaangooyooyinka ee qaybaha oo dhan. Marka la eego xaqiiqda ah in dhibaatada COVID-19 ay ku qasabtay shirkado badan inay gebi ahaanba joojiyaan ama si weyn hoos ugu dhigaan tababarka, waxaan sii wadi doonnaa inaan la jaanqaadno faylalka ay ka kooban tahay si loo hubiyo inaan wax ku biirin karno dib-u-bilaabista warshadaha, ”ayuu yiri Frédéric Leger, Madaxweyne Ku-Xigeenka Ku-Meelgaarka Ku-Meelgaarka ah, Badeecadaha iyo Adeegyada Ganacsiga ee IATA & Adeegyada Xamuulka Adeegyada (CNS).
IATA waxay bilaabeen dhowr dadaal oo to kaa caawin doonta tababarka shaqaalaha duulista.